केहि नयाँ गुगल नक्शा मार्करहरू Martech Zone
केहि नयाँ गुगल नक्शा मार्करहरू
आइतवार, सेप्टेम्बर 2, 2007 बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
यस साताको अन्तमा म ग्राहकको लागि म्यापि site साइट समाप्त गर्दैछु र हालसालको मार्कर (आइकन) स decided्ग्रहको निर्णय लिन्छौं त्यहाँ राम्रा सादा थिए, कुनै आयामको अभाव। जब म ब्रेक लिइरहेको थिएँ, मैले एउटा नयाँ संग्रह गर्ने निर्णय गरें। स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् मार्करहरू यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस् र ती व्यावासायिक वा गैर-व्यावसायिक प्रयोगको लागि प्रयोग गर्नुहोस् ... मेरो मात्र आवश्यकता एक राम्रो छ धन्यवाद!
छायाँ, खाली मार्कर, मार्कर ० मार्फत ० देखि and र A मार्फत Z मार्फत त्यहाँ एरो छ।
टैग: google mapनक्शा मार्करहरू
AT&T: एक उत्तम बिक्री एक विनाशकारी डेलिभरी पछि
मेरो स्टीयरिंग व्हीलमा ड्रमिंगको लागि मनपर्ने गीत
जनवरी १, २०१ 29 १२::2008 अपराह्न
हे, मलाई तपाइँको आईकनहरू डाउनलोड गर्न र मेरो प्रोजेक्ट म्यानमा ती प्रयोग गर्न दिनुभएकोमा धन्यवाद। चियर्स,
यी आइकनहरूको साथ जाने तरीका, तिनीहरू धेरै छिटो छन्। तिनीहरूलाई प्रकाशित गर्नुभएकोमा धन्यबाद।
अप्रिल 3, 2008 मा 4: 40 एएम
मानक हरियो तीरको लागि जताततै हेरेको थियो, तर मैले फेला पार्न सकिन।
tnx तपाइँलाई म यसलाई 😀 मा राख्न सक्दछु
अप्रिल 6, 2008 मा 2: 28 एएम
मलाई आइकनहरू डाउनलोड गर्न दिनुभएकोमा धन्यवाद।
अप्रिल 7, 2008 मा 9: 24 PM
राम्रोसँग गरियो! तपाईको आइकनहरू सार्वजनिक गर्नका लागि धन्यबाद।
अप्रिल 12, 2008 मा 7: 46 PM
आइकन को लागी धन्यवाद !! तिनीहरू महान छन्!
जुन 11, 2008 मा 4: 17 PM
नमस्कार अरूलाई डाउनलोड गर्नका लागि वेबमा राख्नु भएकोमा धन्यवाद! अरूले तपाईको उदाहरण अनुसरण गर्छन् भने!
जुलाई १,, २०१ at १::11२ अपराह्न
नमस्ते म मेरो प्रोग्राम gpsdings द्वारा उत्पन्न नक्शा को लागी तपाईको लेबल लगाएको मार्कर प्रतिमा प्रयोग गर्दछु (http://gpstools.sf.net).
महान! मलाई खुशी छ कि यी यति लोकप्रिय छन्!
अगस्ट,, २०१ 11 2008:२१ अपराह्न
धन्यवाद डग्लस, यी धेरै सहयोगी छन् र तिनीहरूलाई कुनै तारको साथ प्रयोगको लागि प्रस्तावको लागि धन्यवाद!
तपाईं शर्त, माइक! अझ आउने!
सेप्टेम्बर 6, 2008 मा 3: 07 AM
म केवल यस प्रकारको नम्बरित मार्करहरूको खोजी गर्दैछु तर म कसरी तिनीहरूलाई मेरो गुगल नक्शामा राख्छु? त्यहाँ मेरो आफ्नै आइकनमा राख्नको लागि एक तरीका छ तर मैले वेबमा सिधै गुगल नक्सामा फाइलहरू डाउनलोड गर्नु पर्दछ जस्तो देखिन्छ। प्रो जस्तो होईन तपाईले बुझ्नुहुन्छ तर मलाई मेरो नक्सामा काम गर्न मन पर्छ!
अक्टूबर २१, २०१ at २:०28 बिहान
धन्यवाद साथी! प्रिटि राम्ररी भयो !!
डिसे 9, 2008 मा 5: 05 AM
आइकन को लागी धन्यवाद
जनवरी १, २०१ 30 १२::2009 अपराह्न
आईकन को लागी धन्यवाद!
म तपाईंको कफीको मालिक हुँ
आइकनहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाइँलाई धेरै धेरै समय धन्यवाद बचाईयो।
मार्स 25, 2009 मा 2: 52 एएम
फन्टका लागि धेरै धेरै धन्यवाद :)
अप्रिल 6, 2009 मा 5: 41 PM
मार्करहरूका लागि धन्यवाद। म तपाईंको रातोको एक सेलेसन प्रयोग गर्दैछु गत २ बर्षमा वन्यजन्तु दृश्यहरूको अवलोकनको एकत्रित गर्न अनुमति दिन। मैले र easily्ग परिमार्जन गरेको छु र अर्को समान सेट गर्न जुन मैले वन्यजन्तु अवलोकनको लागि प्रयोग गरिरहेको छु जुन २ बर्ष भन्दा अघि देखिएको थियो।
सुझावको रूपमा तपाईसँग अन्य प्रतीकहरूका मार्करहरू पनि हुन सक्दछन् ( + - * #? । : ) र विभिन्न शेडिंगहरू। हे पट्टि पनि सम्भव छ!
अप्रिल 13, 2009 मा 5: 44 PM
यी मार्करहरू वास्तवमै राम्रो देखिन्छन्। उनीहरुलाई साझेदारी गर्न को लागी धन्यवाद।
अप्रिल 23, 2009 मा 5: 20 एएम
राम्रो काम। बाडेको मा धन्यवाद!!!
सेप्टेम्बर १,, २०११ 13::2009० अपराह्न
धन्यवाद डगलस, त्यहाँ केवल महान छन्!
सेप्टेम्बर 15, 2009 मा 10: 11 AM
डगलस साझा गर्न को लागी धन्यवाद!
म तपाईंलाई सम्पर्क गर्दै छु किनकि म "नक्शा आइकन संग्रह" को निर्माता हुँ, र मैले सोचें कि तपाई मेरो ब्लगमा मेरो प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गर्न चाहानुहुन्छ।
नक्शा आइकन संग्रह तपाईंको स्थान चिन्हहरूको लागि free०० निःशुल्क आईकनहरूको प्याक हो। तपाईं तिनीहरूलाई Google नक्सामा मैन्युअल्ली राख्न सक्नुहुनेछ "मेरो नक्सा" सुविधाको साथ, वा Google नक्सा एपिआईको साथ स्वचालित रूपमा।
रंग कोटिहरूमा संगठित, तपाईं आइकनहरूको पूर्ण संग्रह पाउनुहुनेछ, जस्तै सिनेमा, स्कूल, बैंक, जापानी रेस्टुरेन्ट र कपडा स्टोर।
बाँकी आइकनहरू यहाँ हेर्नुहोस्: http://code.google.com/p/google-maps-icons/